Ianao dia mandray anjara ao amin'ny Open Avereno vakiana ny Bit ny Bit: Social fikarohana ao amin'ny Digital Age. Nandritra Open Review dia afaka mamaky ny boky ary manampy tsara kokoa ho azy. Afaka manolotra soso-kevitra amin'ny alalan'ny fampiasana manaova annotations hypothes.is , loharano misokatra rafitra Filazana fohy. Ankoatra izany, ny vohikala ho fanangonana ny hevitra tanteraka amin'ny Tracking ny mpamaky sy ny fialana tahan'ny ny fizarana tsirairay ao amin'ny boky.
Open Review no hitranga raha mbola amin'ity boky ity ny mpitory, Princeton University Press, dia mitarika famerenana mitovy taona. Ny tamberina avy any Open Review sy ny mpiara famerenana dia ho ampiasaina mba hanangana havaozina sora-tanana. Ny Open fotoana Review hifarana raha sora-tanana ny farany dia nanaiky ny Princeton University Press, izay mety ho tamin'ny Novambra 2016.
FAQ momba ny misokatra famerenana
Inona no feedback no tadiavinareo?
Open Review dia tsy momba ny misambotra typos. Kosa Open Review dia natao mba hanangona karazam-tamberina rehetra, ary faly indrindra aho fa misy hevitra ianao momba ny fananana ny boky. Misy fizarana izay tena mampisafotofoto hitanao? Ve ny hevitra hitanao zava-dehibe indrindra? Moa ve aho manao filazana fa ny hevitrao tokony hozahan-toetra? Misy ampahany ao amin'ny boky izay eritreritrao tokony hesorina? Raha miahiahy, mihevitra aho fa tokony hanaraka ny iray amin'ireo fitsipika lehibe indrindra ao amin'ny Wikipedia: Aoka ianao ho sahy .
No Hataoko mahita ny annotations fa olon-kafa no manao?
Eny, ny annotations rehetra dia bahoaka. Afaka mahita azy eo amin'ny ilany ankavanana ny tsirairay pejy na ianao dia afaka mamaky azy ireo ao amin'ny renirano endrika .
Inona no soa ho an'ny mpamaky?
Ianao mahazo mamaky ny sora-tanana sy manampy tsara kokoa ho azy.
Inona avy no soa ho an'ny mpanoratra sy ny mpitory?
Open Review Ny dingana ho soa na ny mpanoratra sy ny mpitory, na dia tsy liana tamin'ny fampitomboana mahazo fahalalana. Ny dingana ambony dia hitarika ny sora-tanana tsara amin'ny alalan'ny hevitra mazava tsara sy tanteraka. Ankoatra izany, ny Open dingana Review dia hanome tahirin-kevitra manan-danja izay azo ampiasaina mandritra izany barotra ao amin'ny boky.
Inona no manaova dingana ho an'ny tranonkala ity?
Hanao feno lahatsoratra bilaogy momba izany amin'ny ho avy. Fa ankehitriny, dia afaka mamaky bebe kokoa momba ny fehezan-dalàna .
Efa nisy olona nanao zavatra toy izany taloha?
Azoko antoka fa manana. Ireto misy somary mitovitovy tetikasa izay henoko momba ny:
Hadley Wickham toa ny hampivelatra ny boky sasany ao amin'ny misokatra tanteraka, na dia Tsy mbola nahita azy hanoratra na inona na inona momba izany.
Lawrence Lessig ny Code 2.0 nosoratana ny ampahany amin'ny wiki.
Boky iray izay tena nanentana ny fanahiko hiezaka izany ny bokin'i Michael Nielsen Reinventing Discovery . Ary, nefa toa izy no mametraka ny boky vaovao momba ny fianarana lalina amin'ny alalan'ny dingana toy izany koa.
Kathleen Fitzpatrick nanao toy izany koa tamin'ny boky ny voalamina mety lany andro: Publishing, Teknolojia, ary ny Hoavy ny Akademia .
Raha misy hafa mifandraika tetikasa izay nalahelo aho, trarantitra ianao, aoka hahafantatra sy isika Ho hametraka rohy. Ny adiresy email dia info@bitbybitbook.com .
Inona no vaovao no nanangona ary ahoana no hampiasaina ny vaovao?
Vakio ny fiainana manokana sy ny faneken'ny politika .
Ahoana no afaka hianatra bebe kokoa momba ny nentim-paharazana mpiara famerenana akademika boky?
Ny AAUP dia namoaka tatitra vao haingana tao amin'ny tsara indrindra ho an'ny mpiara famerenana fomba fanao .
Azoko atao izany miaraka amin'ny boky?
Antoka. Jereo ny fehezan-dalàna fizarana ity vohikala bebe kokoa mikasika ny fomba nataony izany.
Manana fanontaniana hafa momba Open Review. Ahoana no mahazo mifandray?
Mandefasa mailaka ho info@bitbybitbook.com .